यी राशिका व्यक्ति बन्छन् कम उमेरमै धनवान, भाग्यले यसरी साथ दिनेछ ! जान्नुहाेस् – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/यी राशिका व्यक्ति बन्छन् कम उमेरमै धनवान, भाग्यले यसरी साथ दिनेछ ! जान्नुहाेस्
यी राशिका व्यक्ति बन्छन् कम उमेरमै धनवान, भाग्यले यसरी साथ दिनेछ ! जान्नुहाेस्
काठमाडौं। हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ।
वृष राशिका व्यक्तिहरूले विलासी जीवनको लागि छिट्टै अवसरहरू फेला पार्दछन्। वास्तवमा, यस राशिका व्यक्तिहरू स्वभावले पनि सांसारिक सुखविलासलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यो राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो, जुन सबै प्रकारका भौतिक आनन्दहरूको कारक हो। यस राशिका जातक कलामा दक्ष हुन्छन् र उनीहरूको कडा परिश्रमको आधारमा, उनीहरू सफलताको सिढीमा धेरै चाँडो चढ्न सफल हुन्छन् ।
कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरुको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको उनीहरूको कडा परिश्रम हो। यी व्यक्ति आफ्नो परिवारको खुशीको लागि कडा परिश्रम गर्छन् र सफलताको उचाइ छुन्छन्। यिनीहरू आफ्नो कडा परिश्रमको कारण जीवनमा प्रारम्भिक सफलता प्राप्त गर्छन्। यी व्यक्तिहरु आफ्नो प्रियजन र उनीहरुको खुशीको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। कर्कट राशिका व्यक्ति धेरै भावुक हुन्छन्। चन्द्रमा यस राशिको स्वामी हो ।
सिंह राशिको स्वामी सूर्य हुन् जसले राजा, नेता, उच्च अधिकारी दर्शाउँछ। यस राशिका जातकसँग राम्रो नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यिनीहरू आफ्नो नेतृत्वको कारण चाँडै सफलताको चरम सीमामा पुग्न सफल हुन्छन्। यी व्यक्ति भीडमा आफ्नो छाप छोड्न र अरूबाट अलग देखिन चाहन्छन्। सिंह राशिका जातक चाहन्छन् कि मानिसहरूले उनीहरुलाई याद गरून्, प्रशंसा गरून् र उनीहरलाई आफ्नो आदर्श मानुन्। त्यसकारण,यी मानिस जीवनमा कडा परिश्रम गर्छन् र अगाडि बढ्न सफल हुन्छन् ।
वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू चाँडै सफलता प्राप्त गर्छन्। यिनीहरुमा भौतिक चीजहरूको लागि ठूलो स्नेह हुन्छ र यो इच्छा पूरा गर्न कडा परिश्रम गर्छन्। गाडी-बंगला र आरामका अन्य चीजहरूप्रति यी व्यक्ति चाडै आकर्षित हुन्छन्। यो सबै प्राप्त गर्न निकै कडा परिश्रम गर्छन् र सफलता प्राप्त गर्छन् ।
निषेधाज्ञामा कसैको पनि चुलो ननिभोस् भन्ने उद्देश्यका साथ भैरवामा फुड बैंक शुरु
एसईईका विद्यार्थीले बोर्डबाट छाप लागेको ग्रेडसिट प्रमाणपत्र १५ दिनपछि पाउने
उपत्यकाका ३ जिल्ला लगाएत ७३ जिल्लामा थप ५३५ जना कोरोना सङ्क्रमित !
काठमाडौं उपत्यकामा हाेला त फेरि लकडाउन ?